Bit By Bit - Mass mmekota - 5.3.2 Foldit
Foldit bụ a mara mma na-emeghe oku na-aga n'ihi na ọ na-enyere ndị na-abụghị ndị ọkachamara na-ekere òkè na n'ụzọ na-fun.
The Netflix Nrite, mgbe evocative ma doo anya na, adịghị atụ na nso nke na-emeghe oku na-aga oru ngo. Dị ka ihe atụ, na Netflix Nrite ọtụtụ ndị dị oké njọ sonyere nwere afọ nke ọzụzụ na ọnụ ọgụgụ na igwe mmụta. Ma, na-emeghe oku na-aga oru ngo pụkwara ịgụnye sonyere ndị na-enweghị ụlọ ọzụzụ, dị ka e gosiri Foldit, a protein mpịachi egwuregwu.
Protein mpịachi bụ usoro site na nke a yinye amino asịd na-ewe on ya udi. Na a mma nghọta nke usoro a, ndị ọkà nwere ike chepụta na-edozi na kpọmkwem shapes na ike-eji dị ka nkà mmụta ọgwụ. Mfe ezi a bit, ndi na-edozi agbasaghị ịkwaga ha kasị ala ume nhazi, a nhazi na anaghị ekwe ndị dị iche iche pushes na akwusila n'ime protein (ọgụgụ 5.7). Ya mere, ọ bụrụ na a na-eme nchọpụta chọrọ ikwu ihe udi n'ime nke a protein ga n'ogige atụrụ, ihe ngwọta na-ada mfe: na-agbalị nnọọ ihe niile kwere omume configurations, gbakọọ ha ume, na-ekwu na ndị protein ga n'ogige atụrụ n'ime kasị ala ume nhazi. O di nwute na, a arụrụala ike obibia na-agụnye agbalị niile kwere omume configurations bụ computationally agaghị ekwe omume n'ihi na e nwere ọtụtụ ijeri na ọtụtụ ijeri ndị nwere configurations. Ọbụna na kasị dị ike na kọmputa nwere taa-ma na-abịanụ-arụrụala ike na-dị nnọọ agaghị na-arụ ọrụ. Ya mere, ndị ọkà mepụtara ọtụtụ nkọ algọridim na-rụọ ọrụ nke ọma ịchọ kasị ala ume nhazi. Ma, n'agbanyeghị na oke ichekwa na nkà mmụta sayensị na mgbakọ mgbalị, ndị a algọridim ka ezughị okè.
Ọgụgụ 5.7: Protein mpịachi. Image e kere ma dọba n'ime ọha domain site "DrKjaergaard". Isi Iyi: Wikimedia Commons .
David Baker na ya òtù nnyocha na Mahadum nke Washington bụ akụkụ nke obodo nke ndị ọkà mmụta sayensị arụ ọrụ ịzụlite mma mgbakọ abịaru nso ka protein mpịachi. Iji soro ihe na-eme mgbe ha algọridim na-cranking pụọ, Baker na ya otu ga-mgbe ụfọdụ na-ele a na ihuenyo-nchekwa na visualized ọganihu nke ha algọridim. Mgbe na-ekiri ndị a visualizations, Baker malitere na-eche ma ọ ga-abụ ekwe ụmụ mmadụ omume enyere na usoro, ma si otú malitere Foldit, a kee ihe ndị mara mma na-emeghe oku na-aga (Hand 2010) .
Foldit amama usoro nke protein mpịachi n'ime a egwuregwu na pụrụ egwuri site na onye ọ bụla. Si n'ọnọdụ nke player, Foldit yiri ka a mgbaghoju anya (ọgụgụ 5.8). Player na-n'ihu na a atọ akụkụ tangle nke protein Ọdịdị na pụrụ ịrụ operations- "tweak", "wigul", "wughachi" ya gbanwee ya udi. Site n'ịrụ ndị a arụmọrụ egwuregwu ịgbanwe ọdịdị nke protein, nke n'aka nke na-abawanye ma ọ bụ mbelata ha akara. Critically, akara na gbakọọ dabeere na ume-larịị nke ugbu a nhazi; ala-ume configurations ịkpata elu scores. Yabụ, na akara enyere na-eduzi ndị Player dị ka ha chọọ ala-na-ike configurations. Egwuregwu a nwere ike ime naanị n'ihi na-dị ka ịkọ nkiri Anyela na Netflix Nrite-protein mpịachi bụkwa a ọnọdụ ebe ọ bụ mfe elele ngwọta karịa n'ịwa ha.
Ọgụgụ 5.8: Game ihuenyo maka Foldit.
Foldit si mara imewe enyere Player na obere anụmanụ na ihe ọmụma nke n'ihi mmiri ọgwụ mpi na kasị mma algọridim mere site ọkachamara. Mgbe ọtụtụ egwuregwu na-adịghị karịsịa mma na ọrụ, e nwere a ole na ole egwuregwu na obere ìgwè nke egwuregwu bụ ndị dị ahụkebe. N'ezie, n'ebe a isi na-isi mpi ikwu ihe ga-Ọdịdị nke 10 kpọmkwem edozi, Foldit Player na-enwe ike iti ala-nke na-art protein mpịachi algọridim ugboro ise (Cooper et al. 2010) .
Foldit na Netflix na-agbata n'ọsọ dị iche iche n'ọtụtụ ụzọ, ma ha ma na-agụnye emeghe oku maka ihe ngwọta na-adị mfe na-elele karịa n'ịwa. Ugbu a, anyị ga-ahụ otu Ọdịdị na ihe ọzọ dị nnọọ iche ọnọdụ: patent iwu. Nke a ikpeazụ atụ nke ihe na-emeghe oku nsogbu na-egosi na ha nwekwara ike-eji na ntọala na-adịghị doro anya na amenable ka quantification.